Iskaashiga Delta ee TSA wuxuu hagaajiyaa soo gelitaanka, amniga xarunta Atlanta
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Technology » Iskaashiga Delta ee TSA wuxuu hagaajiyaa soo gelitaanka, amniga xarunta Atlanta
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Technology • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka
Ikhtiyaarka hogaaminaya warshadaha ee macaamiisha Delta ee TSA PreCheck waxay ka faa'iideysanaysaa tikniyoolajiyadda aqoonsiga wejiga si loo fududeeyo waaya-aragnimada gegida dayuuradaha ilaa iridda.
Teknolojiyad cusub ayaa macaamiisha siineysa hab wax ku ool ah oo ay ku maraan gegida dayuuradaha - iyada oo aan la tusin kaadhka lagu raaco warqadda ama aqoonsi dowladeed.
Aqoonsiga dhijitaalka ah ee macmiilka wuxuu ka kooban yahay lambarka baasaboorkooda iyo TSA PreCheck ama Lambarka Socdaalka Dunida ee la yaqaan oo ay xaqiijisay tikniyoolajiyadda aqoonsiga wejiga.
Qalabka aqoonsiga wajiga ayaa marka hore lagu arki doonaa Barta Koontaroolka Amniga Koonfurta ee Atlanta toddobaadyada soo socda.
Rakaabka diyaaradda ee leh xubinnimada TSA PreCheck iyo lambarka Delta SkyMiles, ayaa laga yaabaa inay dhowaan helaan ikhtiyaar ay kula kulmaan safar madaar oo degdeg ah Madaarka Caalamiga ah ee Hartsfield-Jackson Atlanta.
Markii ugu horreysay lagu soo bandhigay baraha kantaroolka amniga ee Detroit horraantii 2021, Delta Air Lines'Khibradda aqoonsiga dhijitaalka ah waa wershadaha marka hore iskaashi gaar ah la leh TSA PreCheck. Waayo -aragnimadu way sii fidaysaa Atlanta, u siinaya macaamiisha hab wax ku ool ah oo ay ku maraan gegida dayuuradaha - iyada oo aan la tusin kaadhka lagu hoydo warqadda ama aqoonsi dawladeed oo muuqda. Kaliya ka fiirso kamarad, macaamiisha u -qalma oo doorta ayaa si sahlan oo hufan u hubin kara boorso, ka gudbaya TSA Khadka amniga PreCheck oo raac diyaaradahooda.
Aqoonsiga dhijitaalka ah ee macmiilka wuxuu ka kooban yahay lambarka baasaboorkiisa iyo TSA PreCheck ama Lambarka Socdaalka ee Gelitaanka Caalamka oo la xaqiijiyey tiknoolajiyadda aqoonsiga wejiga, kaas oo xaqiijinaya aqoonsiga qofka socotada ah ee meelaha la taaban karo ee madaarka. Qalabka aqoonsiga wajiga ayaa marka hore lagu arki doonaa AtlantaBarta Koontaroolka Amniga Koonfurta ee toddobaadyada soo socda waxayna ballaarin doontaa si ay u xulato boorsooyinka lagu rido iyo meelaha la fuulo ka hor dhammaadka sanadka. Delta Air Lines ujeeddadiisu tahay in lagu ballaariyo xarumaha dheeraadka ah sannadka soo socda si loo hubiyo khibrad safar oo aan xuduud lahayn oo ku baahsan shabakadeena.
“Ballaarinta gaarka ah ee aqoonsiga dhijitaalka ah ayaa u dhaqaajineysa Delta hal talaabo si loo gaaro himiladeena ah in la abuuro safar safar oo shaqsiyeed oo si buuxda isugu xiran,” ayuu yiri Byron Merritt, Delta Air Lines'Madaxweyne -ku -xigeenka Naqshadda Khibradda Calaamadda. “Hadafkayagu waa inaan u beddelno daqiiqadaha muhiimka ah sida amniga iyo soo gelitaanka khibradaha aan kala go’ lahayn waa inaan waqti siinno oo aan dib ugu laabanno daqiiqadaha ay macaamiishu ku raaxaystaan. Hal -abuurnimada sida aqoonsiga dhijitaalka ah ayaa la hirgeliyaa iyada oo ujeedadu tahay in loo beddelo waayo -aragnimada safarka ee isku -dhafka ah safar ay macaamiisheennu si dhab ah u sugi karaan. ”
Labadaba Atlanta iyo Detroit, aqoonsiga dhijitaalka ah ee gudaha wuxuu ku dhisan yahay ikhtiyaarka aqoonsiga wejiga ee Delta ee socdaalka caalamiga ah, kaas oo Delta uu bilaabay tijaabinta in ka badan shan sano ka hor wuxuuna ku dhammaaday bilowga terminal -kii ugu horreeyay ee si buuxda biometric -ka Atlanta ee 2018.
Oslo: Askari boolis ah oo la dhaawacay, hubaysan...
Safarka Dalxiiska Oo Bilaabay Safarkii Ugu Horeeyay Ee Aduunka...
Kirismaska ​​iyo fasaxyada sanadka cusub iibka huteelada
Buur Zidone wuxuu leeyahay,
Oktoobar 20, 2021 at 16: 24
Kaliya waa inaad raadisaa taariikhda oo aad soo bandhigtaa waddamada kale…”Ku habboonaanta” iyo “caawinta macaamiisha” waa sida Shiinuhu u iibiyay aqoonsiga wejigiisa “magaalooyinka smart” iyo nidaamka qiimeynta dhibcaha credit si uu u addoonsado muwaadiniintiisa.